ချမ်းချမ်းလွန်: အသုံးဝင်သော ၀က်ဆိုဒ်များ
(Sharing Softwares & General Knowledge)
www.people.com.mm (မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်လေးနော်)
www.khitluneg.org.mm (ရွှေဈေး၊ဒေါ်လာဈေးတွေနဲ့ သတင်းစုံတွေ)
www.alpha.com.mm (ZawGyi Font လေးတွေယူရအောင်)
www.flashband.net (သီချင်းနဲ့ MTV လေးတွေနားထောင်မယ်)
www.myanmarmp3.net (သီချင်းတွေ ဒေါင်းမယ်၊နားထောင်မယ်)
www.weeklyeleven.com (eleven ဂျာနယ်စုံ)
www.studying-singapore.com(ကျောင်းလျှောက်တာ တွေ ကြည့်ချင်ရင်)
www.csstb.gov.mm(၀န်ထမ်း ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး က ခေါ်တဲ့ အလုပ်တွေနော်)
csstb.imis.com.mm(နေပြည်တော် ရုံးအမှတ် (၁၇) ရဲ့
www.unjobs.org(NGO ကခေါ်တဲ့ အလုပ်တွေရှာ မယ်)
www.journalopportunity.com ( အလုပ်တွေ ရှာ မယ်နော်)
www.jivitahospital.org(ဇီဝိတဒါန ဆေးရုံ အကြောင်း သိချင်ရင်)
www.bobo.6te.net (ကလေးများ အတွက် ဘိုဘိုရဲ့ လောကနက်ဂိမ်းနဲ့ ကာတွန်း)
www.ucsy.edu.mm (ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အကြောင်း တွေ ဖတ်ချင်ရင်)
www.myanmaritpros.com (နည်းပညာအကြောင်းလေးတွေ ဖတ်ရအောင်)
www.dhamadarna.net ( ဓမ္မဒါန )
www.myanmarengineer.org ( မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာများအသင်း )
www.phatpa.com (ဖတ်ပါ့ သတင်းဂျာနယ် )
www.ourmandalay.net (ကျွန်ုတို့ ရဲ့ မန္တလေး )
www.myanmarchatonline.org (online သတင်းလေးတွေ )
www.problemclean.ning.com( နည်းပညာလေးတွေဆွေးနွေးရအောင် )
www.wikimyanmar.org ( မြန်မာ အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း )
www.minnkyansis.com ( မင်းကျန်စစ်ရဲ့ ရသကမ္ဘာ )
www.nyakabyar.com ဒါလဲသီးချင်းဆိုက်ပါပဲ။ ကျနော်သူငယ်ချင်းအတွက်နော်။
www.myanmarmp3.net ဒါလေးကလည်းအတူတူပါပဲနော်။ သီးချင်းပါပဲ။
www.searchmyanmar.com ဒီဆိုက်ကလဲကောင်းတယ်နော်။ အသုံးများကတော့ link
http://www.coolmp.com ဒီဆိုက်များကတော့ gmail.
www.hancinema.com (or) net
ဒါကတော့ www.thefreesite.com ဆိုက်ပေါ့နော်။ အကုန်လုံး free
ဒီ http://www.ramonnya.co.cc ဆိုက်ကတော့မွန်အကြောင်းထင်တာပဲနော်။
www.ornagai.com ဒါကတော့အဘိဓာန်တွေဝေငှပေးတယ်နော်။ အကုန်လုံးပေါ့။
ခုကိုဇေဆီမှာ mp3,mp4 တွေအများကြီးမို့လိုချင်တဲ့သူများ။
နောက်အင်္ဂလိပ်သီးချင်းတွေ။ e-book တွေရှိတယ်နော်။
ယူချင်ရင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ uni.kozay@gmail.com ဆီကိုလေ။ တာ့တာ
>> > Myanmar IT Blogs
>> > http://kyawnux.blogspot.com
>> > ttp://linsanle.blogspot.com
>> > http://azure-phoeniz.blogspot.com
>> > http://tahkharka.blogspot.com
>> > http://platonicloveaugust4.blogspot.com
>> > http://soehtet.blogspot.com
>> > http://khaingzaw.blogspot.com
>> > http://natshinnaung.blogspot.com
>> > http://www.rhythmless.isgreat.org
>> > http://www.peacefulforever.co.cc
>> > http://nyameeeain.blogspot.com
>> > http://kyawthetlatt.blogspot.com
>> > http://shwepyithu.blogspot.com
>> > http://www.winzaw-mdy.blogspot.com
>> > http://phoelapyae.isgreat.org
>> > http://www.mgtaryar.iblogger.org
>> > http://www.koyinnyein.blogspot.com
>> > http://aungmyohan.myanmarbloggers.org
>> > http://thuratun.22web.net
>> > http://noway.mmeyes.net
>> > http://zawlay.mmeyes.net
>> > http://kokyawmyintoo.blogspot.com/
>> > http://zawthureintun.googlepages.com ဆိုက်လည်းကောင်းတာပဲနော်။
>> > အိုင်တ်ီမန်းကိုတည်ထောင်သူလေ။
>> > http://nnyioo.googlepages.com ဆိုက်လည်းကောင်းတာပဲနော်။
>> > ဒေါက်တာခိုင်မျုိုးဆိုက်ထဲကရထားတဲ့ဆိုက်လေးတွေပါ။
>> > မြန်မာဘလော့ဒ်တွေကိုဝင်ရေးနေတဲ့အစ်ကိုကြီးတွေ/ဆရာတွေပါ။ ယူထားလိုက်။
>> > http://www.yanaung.blogspot.com/
>> > http://www.soehtet.blogspot.com
>> > http://www.drlunswe.blogspot.com
>> > http://dhammaratha.blogspot.com
>> > http://http/titsartayar.0fees.net
>> > http://www.dhammaweb.net
>> > http://wesheme.blogspot.com
>> > http://nnyilynnseck.blogspot.com
>> > http://emotionalcorner.lanolay.com
>> > http://drkyaingmyo.myanmarbloggers.org
>> > http:///www.mybloglog.com
>> > http://www.funcygens.com
>> > http://samerss.myanmarcalender.com
ုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်မှန်မမှန်သိရအောင် စစ်ကြည့်မယ်
http://www.tvunetworks.com/downloads/player.html World Live TV Channel ကြည့် လို့ ရပြီပေါ့
http://www.malwarebytes.org/mbam.php Malware အတွက် ဆော့ဝဲလ် အသစ်ပါ..။
http://imtranslatorpro.ourtoolbar.com/ ဒေါင်းလွတ် ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်မှန်မမှန်သိရအောင် စစ်ကြည့်မယ်
http:// http://www.zwani.com/ ပုံလှလှလေးတွေ လိုချင်ရင်
http://: http://myanmaritpros.com/ ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများလေ့လာရန်....
http://www.thelist.com/countrycode.html#top နိုင်ငံများရဲ့ ကုတ်ကို သိချင်ရင်....
http://mmastrology.myanmarbloggers.org/ မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် နှင့် နက္ခတ်
http:// http://chitoophoto.blogspot.com/ blog နှင့် I T နည်းပညာ
http:// http://www.deathclock.com/index.cfm ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမလဲ သိချင်ကြပါသလား....
http:// https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6af78d8a85&view=att&a...... ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း...
http:// http://sharingtofrds.blogspot.com/ နည်းပညာ အတွက် လေ့လာရန်...
http:// http://www.myanmarisp.com/computer_ict ကွန်ပြူတာ နဲ့ သတင်း နည်းပညာ..
http://www.imagechef.com/ ကိုယ့်ပုံလေးတွေနဲ့ Logo / Icon လေးတွေလုပ်ချင်ရင်..
http://photofunia.com/ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မြင်ဖို့.....
http://www.topsecretemail.com/Encode_Message.cfm Email တွေကို လုံခြုံအောင် ပို့ကြမယ်..
http://www.passwordmeter.com/ သင်သုံးနေတဲ့ Password လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လား..စစ်ချင်ရင်...
http://burglish.googlepages.com/fontconv.htm မြန်မာ တခြားဖောင့်မှ ဇော်ဂျီဖောင့် သို့ ပြောင်းချင်ရင်...
http://burglish.googlepages.com/testarea.htm မြန်မာ လက်ကွက် လေ့ကျင့်ရန်နေရာ...
http://www.photoshoptalent.com Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ..
http://delicious.com/ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး website..တွေကို ရှာရန်..
http://www.mmphotoshop.net Photoshop ကိုမြန်မာလိုလေ့လာဖို့...
http://www.whatismyipaddress.com Gtalk မှ နိုင်ငံ လိမ်ပြောသူများကို ဖမ်းဖို့...
http://www.4shared.com/file/80626166/b5161ee5/GTunnel.html?cau2=403tNu... GTunnel.exe ကိုလိုချင်ရင်....
http://www.ultrareach.com/ ကျော်မယ် ၊ ခွမယ် ဆိုရင်....
http://www.yousendit.com/ ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၁)
http://www.sendthisfile.com/ ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၂)
http://www.send6.com ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၃)
http://www.drhardware.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ..(၁)
http://www.lavalys.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software...(၂)
http://www.spadixbd.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ....(၃)
http://technorati.com/ Blog တွေရဲ့စာရင်းကို ရှာချင်ရင်....
http://www.alpha.com.mm/alphaprice/alphaprice.php ကွန်ပျူတာ ဈေးနှုန်းတွက်ချင်ရင်...
http://www.memtest86.com/ Memory ကိုစစ်ဖို့ software......
http://winkkk.com/glitters14_comments_Hearts_&_Love.html ချစ်သူအတွက် ပုံလှလှလေးတွေ ယူရန်
http://www.heidi.ie/ Windows ကို မထိစေပဲ ဖိုင်တွေကို ဖျက်တဲ့ software........
http://www.download.com/ThreatFire-AntiVirus-Free-Edition/3000-2239... နဲ့ Virus ကိုရှင်းတဲ့ software.....
http://www.gadwin.com/printscreen/Print Screen ဖမ်းတဲ့ Software...
http://www.optimizingpc.com/index.html Software တွေ အစုံဆုံးနေရာ...
http://www.abstradrome.com/ Hard Disk ကိုသွေးသစ်လောင်းတဲ့ software..
http://www.runtime.org/data-recovery-downloads.htm Hard Disk အတွက် Recover လုပ်တဲ့ software....
http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Partition-Magic.sh... Hard Disk ကို Partition ချတဲ့ software...
http://www.heidi.ie/Window ကို မပါစေပဲ Hard Disk ကိုဖျက်တဲ့ software...
http://www.customizetalk.com/ Gtalk အကြောင်းစုံစုံ သိချင်ရင်...
http:// http://www.vintelligence.blogspot.com/ Java အကြောင်းသိလိုသမျှ..
http:// http://www.pcworld.com/ ကွန်ပျူတာ အကြောင်း ဘာထူးလဲ..(PC World)..
http:// http:// http://www.ebooksbank.com/ E-Books တွေကူးဖိူ့...
http:// http://www.mediaringtalk.com ဖုန်းအလကားပြောရဖို့နေရာ......
http:// http://www.w3schools.com/ ပရိုဂမ်သမားတွေအတွက်....
http://www.brothersoft.com/ Software တွေ ကူးမယ်ဆိုရင်...
http://www.flashvortex.com/index.php စိတ်ဝင်စားစရာ စာလုံးလေးတွေ...
http:// http://www.books-hive.com မြန်မာ E-books တွေ....
http:// http:// www.myanmarengineer.org အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ဆွေးနွေးဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ နေရာ..
http:// http://www.adobetutorialz.com Adobe ရဲ့ Photoshop နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool တွေလေ့လာစရာ
http:// http:// www.mcpa.org.mm/ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်...
http:// http://www.reader.google.com Google reader တဲ့ဟေ့... အသုံးပြုနည်းကိုတော့ Blog နံပါတ် 46 မှာရေးထားပါတယ်..
http://free.avg.com/download-avg-anti-virus-free-edition AVG Antivirus Download အလကားရတဲ့နေရာ....
http://www.insideoe.com/resources/ Outlook Express ကိုပြင်တဲ့နေရာ...
http://www.webroot.com/En_US/index.html Webroot Antivirus & Spyware Software ယူဖို့နေရာ..
http://www.mymyanmar.net/2g/ မြန်မာယူနီကုတ် အကြောင်းလေ့လာဖို့..
http://isoft.ygn.cc/ မြန်မာ့ ပညာရှင်များကို လေ့လာဖို့...
http://www.softpedia.com/get/internet/E-mail/Mail/Utilities/Gmail-Mana... Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software..(၁)
http://www.longfocus.com/firefox/ Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software ....(၂)
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:1/cat:5 Download Management လုပ်တဲ့ Software..
http://www.imtoo.com/dvd-ripper-platinum.html DVD ထဲက သီချင်းတွေကို ဖြတ်တဲ့တောက်တဲ့ Software..(1)
http://besweet.notrace.dk/ DVD ထဲက သီချင်းတွေ ဖြတ်တဲ့ တောက်တဲ့ Software..(၂)
http://www.computeractive.co.uk/downloads/backup-and-recovery ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၁)
http://www.objectrescue.com/download/ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၂)
http://www.xilisoft.com/ DVD ဖြတ်တဲ့ Software...
http://www.mp4converter.net/download.html?ID=1 MP4 လုပ်တဲ့ Software တွေ...
http://www.dbpoweramp.com/ WAV မှ MP3 ပြောင်းပေးတဲ့ Software..
http://www.miksoft.net/comments.htm Video ဖိုင်တွေဖွင့်တဲ့ Software...
http://www.cucusoft.com/ DVD ကူးတဲ့ Software တွေ..
http://www.softpedia.com/get/Antivirus/Trojan-Remover.shtml Trojan (ထရိုဂျန်) ကိုရှင်းတဲ့ Software...
http://www.infinadyne.com/flashretriever.html Memory Card ထဲမှ ပုံတွေ ၊ ဗီဒီယိုတွေ ၊ သီချင်းတွေ မှားဖျက်မိရင် ပြန်ယူပေးတဲ့ Software..
http://www.wnsoft.com/ ပုံတွေကို Album အလိုက်ပို့လို့ရတဲ့ Software...
http://www.freedownloadscenter.com/Search/internet_cleaner.html Internet သုံးထားတဲ့အတွက် မလိုတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်တဲ့ Software...
http://www.powerkaraoke.com/src/prod_karaokecdgcreatorpro.php ကာရာအိုကေ ဆိုလို့ရတဲ့ Software...
http://www.lostpassword.com/ Password တွေကို ရှာပေးတဲ့ Software..
http://www.pcdocpro.com/ PC ထဲက အမှားတွေကို ပြတဲ့ Software ...
http://www.acronis.com.sg/ Partition ချတဲ့ Software...(၁)
http://www.partitionmanager.com/ Partition ချတဲ့ Software....(၂)
http://www.soft32.com/download_151.html Partition ချတဲ့ Software....(၃)...(ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး Software..ပေါ့.)
http://www.styopkin.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပေးတဲ့ Software...(၁)
http://www.fastphotorenamer.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပြောင်းပေးတဲ့ Software...(၂)
http://www.infinadyne.com/download.shtml CD/DVD ကောင်းမကောင်း စမ်းတဲ့ Software....
http://www.download3000.com/download_27264.html ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ ဖိုင် ကိုရှာတဲ့ Software...
http://www.manageengine.com/products/desktop-central/software-hardware... Windows Product Key ကိုရှာတဲ့ Software...
http://www.messx.net/download.php English - Myanmar အဘိဓာန် Software...(ဖုန်း ၊ PC တွေအတွက်ပါ ရတယ်..ဟဲဟဲ ပိုက်ဆံတော့ ဆောင်ထားပေါ့..)
http://dictionary.all-channel.com/ English - Myanmar - English Online အဘိဓာန်...(၁)
http://www.burmese-dictionary.org/ Myanmar-English-Myanmar Online အဘိဓာန်...(၂)
http://www.ayinepan.com/literature/dictionary/ English - Myanmar အဘိဓာန်စာအုပ်....
http://www.monywa.org/fonts/index.htm English - Myanmar ဖောင့်များ.....
http://www.mtvmusic.com/ MTV MUSIC တွေလိုချင်ရင်...
http://www.keronsoft.com/ ပုံတွေအများကြီးကို တစ်ခါတည်း နာမည်ပြောင်းတဲ့ Software...
http://www.acutesystems.com/ Mac မှ Window သို့ ဖိုင်ပြောင်းပေးတဲ့ Software....
http://www.spadixbd.com/ Program တွေ PC ထဲမှာ နေရာယူတာကို ကြည့်တဲ့ Software...
http://www.axialis.com/download/iw.html Icon လုပ်တဲ့ Software...
http://www.softfields.com/ ပုံတွေကို တပြိုင်နက်ကြည့်တဲ့ Software.....
http://www.lavasoft.de/ Adware ကိုရှင်းပေးတဲ့ Software...
http://www.irfanview.com/ File အားလုံးကို ကြည့်လို့ရတဲ့ Software...
http://www.passmark.com/products/keytest.htm Keyboard ကိုစစ်တဲ့ Software...
http://www.passmark.com/products/pt.htm Performance ကိုစစ်တဲ့ Software....
http://www.passmark.com/products/bit.htm PC ကို BurnIn စစ်တဲ့ Software...
http://www.testlog.com/ Program တွေကို Test Plan လုပ်ပြီးစစ်ပေးတဲ့ Software....
http://www.passmark.com/products/wirelessmonitor.htm Wireless WiFi လုပ်ပေးတဲ့ Software...
http://www.passmark.com/products/batmon.htm UPS & laptop computer battery တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software...
http://www.passmark.com/products/monitortest.htm Monitor မှ CRT & LCD မျက်နှာပြင် ပုံရိပ်တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software..
http://www.passmark.com/products/modemtst.htm Modem ကောင်း ၊ မကောင်းစစ်ပေးတဲ့ Software...
http://www.passmark.com/products/soundcheck.htm Sound Card ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software...
http://www.passmark.com/products/oscheck.htm Operation System ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software...
http://myanmaritpros.com/profiles/blog/show?id=1445004%3ABlogPost%3A67... ISA Server .ကိုမြန်မာလို လေ့လာဖို့.....(၁)
http://myanmaritpros.com/group/smenetworking ISA server ကို မြန်မာလို လေ့လာဖို့...(၂)
http://download.cnet.com/Active-SMART/3000-2086_4-10055071.html?part=d... Active SMART Software လိုချင်ရင်..
http://www.brothersoft.com/google-talk-shell-70998.html Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၁)
http://www.softpedia.com/progDownload/google-talk-shell-Download-71248... Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၂)
http://portableapps.com/apps/utilities/toucan USB drives တွေအတွက် Password ပေးတဲ့ software..
လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကို Blog နံပါတ် 92 မှာ ရေးထားပါတယ်..။လေ့လာကြည့်ပါ...။လုပ်ထားသင့်ပါတယ်..။
http://www.malwaresweeper.com/ malware တွေကို သတ်တဲ့ Software...
http://www.mediafire.com/download.php?ym02owyxyxb Malware sweeper ဒေါင်းလို့ မရဘူးဆိုလို့...
http://www.mediafire.com/download.php?mw20ofgdmll Memory Strick ထဲကဟာတွေကို ဖွတ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်....
http://www.freepdfconvert.com/ pdf ဖိုင်တွေပြောင်းတဲ့ ဆောဝဲလ်......
http:// http://vn247.net/flash/Relax/drink-cafe.swf ကော်ဖီချင်ရင်သောက်ဖို့ပါ...
http://www.softfields.com/ ပုံတွေကို တပြိုင်နက်ကြည့်တဲ့ Software..
www.ehow.com/how_2124668_remove-trojan-virus.htm ဗိုက်ရဒ် စကင်းများ free ဒေါင်းနိုင်သည်
http://www.ning.com Ning ၀က်ဆိုဒ်ပြုလုပ်နည်း
www.worldenglishinstitute.org (အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူများအတွက် TOEFL အထောက်အကူပြုစာစဉ်ရရှိနိုင်သည်)
2. www.shareme.com (ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ၊ စီးပွားရေးပညာရပ်များအပါအ၀င် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအကြောင်းစုံလင်စွာရရှိနိုင်သည်)
3. www.learningpage.com (ဘာသာရပ်အတော်စုံပါသည်။ လူလတ်ပိုင်းများလေ့လာသင့်သည်)
4. http://www.myanmarnlp.org.mm/index.php ( အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာသို ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်စမ်းသပ်ရန်အတွက် အခမဲ့ ရယူနိုင်သည်) http://www.myanmarnlp.org.mm/index.php?option=com_content&view=...
5. www.merriam-webster.com (အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်)
6. www.commerce-database.com (စီးပွားရေးစကားအသုံးများကို လေ့လာနိုင်သော အဘိဓါန်ဖြစ်သည်)
7. www.computerweekly.com (နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းစုံဖော်ပြထားသည်)
8. http://knowfree.net (စာအုပ်တော်တော်များများကို ဖတ်ရှုနိုင်၊ ကူးယူနိုင်သည်)
9. www.fixya.com ( အလွန်ကောင်းပါသည် အိမ်သုံးလျှပ်စစ် ပစ္စည်းများအတွက်ပြင်ဆင်နည်း၊ အသုံးပြုနည်းများ အတော်စုံလင်ပါသည်)
10. www.universalclass.com (အွန်လိုင်းပေါ်မှ အဝေးရောက်သင်ယူနိုင်သောတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ရုပ်မြင်စနစ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်သင်ယူနိုင်သည်)
11. www.houseofplant.co.uk (အိမ်တွင်းပန်းအလှဆင်နည်းပညာများအကြောင်းလေ့လာနိုင်သည်)
www.lpi.org (Linux စနစ်ကိုလေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲများ အကြောင်းလည်ပါရှိသည်)
2. www.helpwithpcs.com (ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာများကို အမျိုးအစားစုံလင်စွာတွေ့ရသည်)
3. www.simplehelp.net (မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်၍ ပြဿနာများရှိခဲ့လျှင် မေးမြန်းနိုင်သည်)
4. www.asia-oss.net (Open Source စနစ်ကိုလေ့လာသူများ မဖြစ်မနေ၀င်လေ့လာသင်သည်)
5. www.databasejournal.com (Database သီးသန့်စုစည်းထားသည်။ အလွယ်တကူသင်ယူနိုင်သည်)
6. www.wwpi.com (ကွန်ပျူတာပညာရပ်များအပြင်၊ Network ပညာများကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည်)
www.psdfreebee.com (Photoshop နည်းပညာကို စလယ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများစွာဖြင့် လေ့လာနိုင်သည်)
8. www.educational-software.com (ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်သည်)
9. www.educationalsoftware.co.uk (ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို သင်ယူနိုင်သည်)
10. www.okino.com (ဂရပ်ဖစ်သုံးဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များစွာကို လေ့လာနိုင်သည်)
www.emailaccount.com (Domain များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံးချ အခမဲ့ရသော mail ဖြစ်သည်)
2. www.gawab.com (Language များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီး လွယ်ကူစိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံး ချ အခမဲ့ရသော mail ဖြစ်သည်)
3. www.inbox.com (သုံးအားကောင်းပြီး လိုင်းဝင်ထွက်လွယ်ကူမြန်ဆန်ကာ 5GB ပေးထားသော free mail ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်)
4. www.hotmail.com (Microsoft မှ လွှင့်တင်ထားသော ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်)
5. www.mail.com (အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများစွာကိုရရှိသုံးစွဲနိုင်သည်)
6. www.myway.com (အလှဆုံးသောပြင်ဆင်မှုများဖြင့် ရရှိနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်)
7. www.dora.com (၎င်းတွင်လည်း ပြင်ဆင်ပုံအလှတစ်မျိုးနှင့် မြင်တွေ့ရရှိနိုင်သည်)
8. http://mail.yahoo.com (အတန်အသင့် နာမည်ရှိသော yahoo mail ဖြစ်သည်)
9. www.eudora.com (နာမည်တော့ရှိပါတယ် မြန်မာပရိသတ်နည်းပါတယ်)
10. www.30gigs.net (အခမဲ့ 30GB ရရှိနိုင်သော မေးလ် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်)
Myanmar IT Blogs
http://khaingzaw.blogspot.com ကွန်ပြူတာ ဒိုင်ယာရီ
http://www.winzaw-mdy.blogspot.com ၀င်းဇော် စာဖတ်ရန်
http://kokyawmyintoo.blogspot.com/ ၀င်းဒိုးစ် တင်နည်းတွေလေ့လာလို့ရပါတယ် နည်းပညာလေ့လာရန်…….
http://komoethee.blogspot.com ဒါကတော့ ကိုရီးယာမင်းသားမင်းသမီးများရဲ့ဆိုက်တွေပါ။
www.thefreesite.com ဆိုက်ပေါ့နော်။ အကုန်လုံး free ရတယ်ပြောတာပဲနော်။
www.photoro.com ဆိုက်လည်းဓာတ်ပုံကောင်းတယ်ပြောတယ်နော်။ဟိုကိုရီးယားကား ဒိုးဒိုးဒေါက်2ဘုနှင့်ဘောက်
http://search.imesh.com ဒီဆိုက်မှာ ဆော့ဝဲလ်တွေအများကြီး free ဒေါင်းလို့ရတယ်
http://api.ning.com/files/iwBtgDi6JL514kqx63rc61HQ6drUjzuF7v38fGN9S...*BCmO6AlghoDD0O4*xAroSG19/Mailhack.html သူများ Gmail ကို Hack ကြရအောင်ဗျာ...သိအောင်ပဲ ပြောပြတာပါ၊ လုပ်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။ဖော်ပြပါ လိပ်စာကို အားလုံး Copy ကူးယူပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ၊
မိမိ Hack လိုသော Gmail account ကို ရိုက်ပြီး ခဏစောင့်ပါ...
http://www.mediafire.com/?nywimgmmgiz ယောကျာ်းလေးများအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်..
http://shareme.com mp3ဆော့ဖ်တွေဒေါင်းမယ်
http://yeminn.ning.com/profile/1pt151b3ps62e မောင်ရင်မောင် မင်္ဂလာပါ Fix Online Computer Services မှ ကြိုဆိုပါတယ်
http://jockeryock.ning.com/profiles/blog/list ဂျိုကာရုပ် ဆိုဒ်
http://kanaung.com… Continue ကနောင် ဝဘ်ဒီဇိုင်း
http://friendsmyanmar.ning.com/profiles/blog/list မြန်မာသူငယ်ချင်းများ ဆိုဒ်
http://octobe.ning.com/profiles/blog/list လ၀န်းဖြူ ဆိုဒ်
http://ucst-moonlight.ning.com/profiles/blog/list မြန်မာလူငယ်များ ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်သော နည်းပညာနှင့် ဗဟုသုတများ
http://yadanabononlinestudents.ning.com/profiles/blog/list ရတနာပုံ ဆိုက်
http://linsanle.blogspot.com နည်းပညာမှတ်တမ်း အရင်ဆုံး စုဆည်းထားတဲ့နေရာလေးပေါ့
http://translate.google.com ဒီလင့်မှာ ရီဂျစ်စတာ သွားလုပ်ရင် BitDefender AntiVirus 2009 တစ်နှစ်လိုင်စင် ရပါတယ်။ Create user နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အီးမေးလ် စစ်စရာ မလို ချက်ချင်းကို ပေးတာ။ ဒီလောက်ပေါတာ ဟိုမှာ သွားဝယ်ဖို့ လိုသေးလို့လား :P
http://www.fileden.com မြန်မာ ဘလော့ဂါများ ebook လေ့လာမှု့နည်းပညာစာအုပ်များရှိပါသည်
http://myanmarblognewpost.blogspot.com မြန်မာ ဘလော့များအစုံဆုံးနေရာလေးနော်
http://www.mgsaytanar.blogspot.com မောင်စေတနာ ဖိုရမ်
http://komyatblog.blogspot.com/search/label ကွန်ပြူတာ နည်းပညာတို့ဆုံဆည်းရာဖိုရမ်
www.nyinaymin.com ညီနေမင်း ဆော့ ဖ် ၀ဲတွေ ....ဘာတွေ အစုံ ပါတယ်မြန်မာလိုတော်တော်များများရေးထားတယ်
http://www.mgkyawswarnyein.net/ မောင်ကျော်စွာငြိမ်း ဖိုရမ် နည်းပညာမြန်မာလိုရေးသားထားပါ၍လေ့လာ၍အလွန်ကောင်းပါသည်
http://forverfriends.ning.com/profiles/blog/list ထာဝရ ဆိုဒ်
http://www.komyatmm7.co.cc/ ကိုမြတ် ဖိုရမ် နည်းပညာ မြန်မာလိုရေးသားထားပါ၍လေ့လာ၍အလွန်ကောင်းပါသည်
http://mwdonline.ning.com/profiles/blog/create မြ၀တီအွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့ ဖိုရမ်
http://messengerforbuddhist.blogspot.com/ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆော်ကားနေသောဆိုကဖိုရမ်
http://www.myanmar.mmtimes.com/2010/upper/454/upper01.html မြန်မာတိုင်း(မ်) ၀ဒ်ဆိုဒဖိုရမ်
httpmprcommunity.ning.comprofilesblognew Myanmar Punk Rock Community ၀ဒ်ဆိုဒ်ဖိုရမ်
http://myanmarmultiplyszone.ning.com မြန်မာ မာတီရပ်ဝန်းဖိုရမ်
httptaryarpwagye.ning.com ရွှေကျွန်းသား သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူအပေါင်း ကျမ်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေဖိုရမ်
http://thanlonnge.info/ သံလုံငယ် ဖိုရမ်
http://myominlatt.ning.com/ ဧဒင်ဥယာဉ် ဖိုရမ်
http://nattabin.ning.com/profiles/profile/emailSettings?xg_source=m...>သရဲ တစ္ဆေ ဘုံ ဖိုရမ်
httpkozaw357.multiply.com ကိုဇော် ဖိုရမ် ကွန်ပြူတာအကြောင်းလေ့လာရန်တော်တော်စုံပါတယ်
http://future-wave.blogspot.com/ Future Wave Blog - အနာဂတ်လှိုင်း-ရခိုင့်စာပီရပ်ဝန်း
http://aungmyokhaing.ning.com/profiles/blog/list ဘိုင်အိုရဲ့နေရာလေး ဖိုရမ်
http://moelwin.ning.com မိုးသောက်ကြယ် ဖိုရမ်
http://www.myanmarcupid.net/community/index.php မြန်မာမြားနတ်မောင် ကွန်မြူနတီဖိုရမ်
http://amk919.multiply.com/journal/item/26 အေအမ်ကေ ဖိုရမ်
http://www.myanmarmodels.page.tl/Moe-Hay-Ko.htm မြန်မာ မင်းသ္မီးတွေ ပုံလိုချင်ရင်
http://www.myanmarnationalleague.com/ မြန်မာနေရှင်နယ် လိဂ် ဗျို့ တီဗီ ပရိုဂ၇မ်ဘဲပါ တယ် သောက်ရမ်းမိုက်တယ် အဟုတ်.
http://www.mmproverb.com/ မြန်မာစကားပုံဆိုက်လေးဗျ စုံတယ်လို့ပြောရမယ်
http://www.google.com/insights/search ကမ္ဘာ ပေါ်ကလုတွေ ဂူးဂဲကြီးမာ ဘာရှာသလဲကြည့် ရအောင်
http://genfavicon.com/ http://www.html-kit.com ပုံလေးတွေ ကိုအိုင်ကွန်လုပ်လို့ရတယ်ဗျ
http://www.needasig.com/ http://services.nexodyne.com အီးမေး လိုဂိုလေးတွေလုပ်မယ်
http://www.polldaddy.com ကိုယ်ပိုင် poll လေးတွေလုပ်ကြရအောင်
http://www.labpixies.com http://www.mixpod.com http://www.blpgspot.com/ ကိုယ့်ရဲ့ ဆိုက်မာတင်မဲ့ tool လေးတွေပေါ့
http://www.aqua.org/australia/animalencounters_archerfish.html အကောင် ပလောင်လေးတွေ.
www.undergroundsystems.org www.blackhat-forums.com www.phpbbhacks.com ဟက်တဲ့ဆိုက်ပါတဲ့ဝါသနာ ပါရင်ကြည့်ကြပေါ့
http://www.glasbergen.com/ ကွန်ပျူတာ ကာ တွန်းလေးတွေ့
http://winkkk.com http://www.glitter-graphics.com http://www.fodey.com http://www.glitterfy.com
http://www.imagechef.com http://www.mynicespace.com/kisses-46642.html http://www.heathersanimations.com/
http://www.multimediapalace.com လှုပ်ရှားနေတဲ့အလံလေးတွေက ဒီမာဗျ...
http://eainlwanthu.ning.com အိမ်လွမ်းသူ ဖိုရမ်
http://kopeter.blogspot.com) ကိုပီတာရဲ့ အတွေးပုံရိပ်များ
http://mysterysnow.blogspot.com) နင်းနဲ့ မာယာ
http://myanmarsar.zaung.net) မြန်မာစာ မြန်မာစကား
http://www.everyoneit.com) စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း
http://photayokeking.org) စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား
http://soethuhein.iblogger.org/ မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမများ ဘလော့ဂ်
http://www.mathetzin.com/ မသက်ဇင် ဘလော့ဂ်
http://blog.nyilynnseck.com/ ညီလင်းဆက် ဘလော့ဂ်
http://www.niknayman-niknayman.blogspot.com/ နစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်
http://tomorrowplan.blogspot.com/ ပိုကောင်းမယ့် မနက်ဖြန် ဘလော့ဂ်
http://www.mindin.info/ မင်းဒင် ဘလော့ဂ်
http://kaungkinko.myanmarbloggers.org/ ကောင်းကင်ကို ဘလော့ဂ်
http://kathitwinemyanmar.blogspot.com/ (ကသစ်ဝိုင်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ)
1. http://beemp3.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
2. www.bamarlay.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
3. www.irazoo.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
4. www.myanmarmp3.net (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
5. www.ayinepan.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
6. http://music.all-channel.com ((မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်။ အခြားတင်ဆက်မှုများလည်းပါသည်)
7. www.alinyaung.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
8. www.flashband.net (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
9. www.myanmar-music.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
10. http://myanmarmp3album.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်။ အခြားတင်ဆက်မှုများလည်းပါသည်)
11. www.emusic.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
12. www.thewiplist.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
13. www.mp3raid.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
14. www.pansagar.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
15. www.airmp3.net (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
17. www.innwa.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
18. www.nyakabyar.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
19. www.ayinepan.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
20. www.ainmat.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
21. www.lotaya.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
22. www.myanmarmusiconline.net (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
24. www.myanmarmp3.net (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
www.myanmarsoungs.net ဒီဆိုက်ကတော့ dowmload ဆွဲလို့လွယ်တယ်
http://www.eainmathlaing.com OR http://energy08.egihosting.com/22109 သီချင်းတောင်းလို့လည်းရတယ်ဒီ accout ကို invite လုပ်လိုက်ပါ requestsongs@ourdream4all.co.cc On Line ရေဒီယိုနားထောင်ရန်
ဖိုင်များသီချင်းများ တင်နိုင်သည့် sites များ
www.myanmar.mmtimes.com (မြန်မာတိုင်းစ် ဂျာနယ်ကိုမြန်မာလိုဖတ်မယ်နော်)
www.studying-singapore.com (ကျောင်းလျှောက်တာတွေ ကြည့်ချင်ရင်)
www.jivitahospital.org (ဇီဝိတဒါနဆေးရုံ အကြောင်း သိချင်ရင်)
www.bobo.6te.net (ကလေးများ အတွက် ဘိုဘိုရဲ့လောကနက်ဂိမ်းနဲ့ ကာတွန်း)
www.ucsy.edu.mm (ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အကြောင်းတွေ ဖတ်ချင်ရင်)
www.mysuboo.com (ဒါကတော့ စုဗူးလေးနော်)
www.myanmarengineer.org ( မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများအသင်း )
www.myanmarchatonline.org (onlineသတင်းလေးတွေ )
ရုပ်ရှင်ဆိုဒ်ပါ မြန်မာ ၊ တရုတ် ၊ကိုးရီးယား ၊ အင်္ဂလိပ် ၊ အမေရိကန် ကားများနဲ့ နိူင်ငံပေါင်းစုံကကားတွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်
http://www.freewebs.com/khayan_pyar_einmet_group/ http://www.myanmarworld.com/Foreign_Movies.html http://www.burmeseclassic.com/
ပုံများတင်နိူင်သည့် sites များ
• http://www.loonapix.com ပုံတွေပြင်လို့ရတယ်
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ sites တွေပါ
အစားအသောက်အချက်အပြုတ် sites များ
• www.torncity.com ဆော့လို့တော့ကောင်းတယ်ဗျ သူဂိမ်းက Life style အတိုင်းပဲ
• www.y8.com ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဂိမ်းလေးတွေပါ free download ရတဲ့ဟာတော့ရတယ်ဗျ။
Learning for Russia
မြန်မာအနူပညာရှင် web sites များ
11.Hollywood Hair Virtual Makeover
29. Imagic Photo Enhancer
Posted by CHAN LON at 9:15 AM
Labels: အသုံးဝင်သော ၀က်ဆိုဒ်များ
Yogesh Kumar June 22, 2018 at 11:28 PM
LIKE ပေးခဲ့ပါက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Mon Radio (Online)
၀င်ဒိုး7တင်နည်းစာအုပ် (1)
adobe indesignCS3 အသုံးပြုနည်းလေး (1)
Angry Birds Space 1.1.0 (1)
Anti Virus 2012 (1)
Ashamppo UnInstaller 4.22 Final (1)
AVG Free Edition 2012 (1)
Blog လုပ်နည်း အပြည့်အစုံ (1)
Burning tools (4)
Computer Whole Information (1)
Delete Virus exe Folder မြန်မာလို (1)
DeskCalc 5.2.13 (1)
Desktop ကို Log ချမယ် (1)
facebook ဒီဇိုင်းဘလော့တန်ပလိပ် (1)
File အကြီးတွေပို့နည်း (1)
Game Download Websites များ (2)
GAME Spider-Man2The Game (1)
Gmail password ပြောင်းနည်း (1)
Gmail အကောင့်ဖျက်နည်း (1)
Gtalk Translation အကောင့် (1)
Gtalk စာသာ (3)
Gtalk မှာ အမြဲတမ်း Idle ဖြစ်ချင်လား (1)
Ifile it မှဒေါင်းလော့ချနည်း (1)
iphone jail break လုပ်နည်းမြန်မာလို (1)
IT ခေတ် မြန်မာစကားပုံ (1)
laptop computer battery (1)
Laptop ပြုပြင်နည်းမြန်မာလို (1)
Microsoft Office2003 (1)
MON Font (2)
note pad နဲ့ virus စစ်မယ်ဆိုရင် (1)
Photo Edit (21)
Photoshop CS မြန်မာလိုစာအုပ် (1)
skype မြန်မာဖောင့်ပြောင်းနည်း (1)
Skype အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို (1)
Super Anti Spyware (1)
Super Copier (1)
TV လိုင်းကြည့်မယ်။ (1)
USB Antibody (1)
Viber ကို ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးမယ် (1)
Video Edit မြန်မာလိုစာအုပ် (1)
Windows Xp တင်နည်းမြန်မာလို (1)
Windows XP လျှို့ ဝှက်ချက်(၄၀) (1)
youtube မှ Mp4 Dowload လုပ်နည်း (1)
ကွန်ပျူတာpassword လုပ်နည်း (1)
ကွန်ပျူတာမြန်စေမယ့်နည်းလမ်း(၅ )မျိုး (1)
ကွန်ပျူတာနှင့် တူသော မိန်းကလေးများ (1)
ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကာကွယ်ရန် (1)
ကီးဘုတ် ကို ကွန်ပျူတာမှာတီးမယ် (1)
ဆရာတော်ကြီးများ၏ အသိပေးစကားစု (1)
ဒီဇင်ဘာ လက်ဆောင် (1)
ဖတ်စေချင်သော စာအုပ်များ (1)
ဖျက်လို့မရတဲ့ဖိုင်ကို ဖျက်ပေးတဲ့ဆော်ဝဲလ် (1)
မြန်မာ့ နှစ်တစ်ရာပြက္ခဒိန် (1)
ဘ၀ ဖတ်စာ (1)
မယား ( ၇ ) မျိ်ုး ၊ လင် ( ၈ ) မျိုး (1)
မွန် အင်္ဂလိပ် ဒစ်ရှင်နရီ (1)
မလေးရှားတွင် မြန်မာမိန်းကလေး (1)
မြန်မာပြည်မှာ ဖုန်း အင်တာနက်သုံးနည်း (1)
အင်္ဂလိပ်စာကို အသံထွက်ပေးတဲ့ဆော်ဝဲလ် (1)
အင်တာနက်အဆ ၂၀ မြန်အောင်လုပ်နည်း (1)
အွန်လိုင်းမှာ ရုပ်ပြောင်လုပ်ကြမယ် (1)
အသုံးဝင်သော ၀က်ဆိုဒ်များ (1)
မောက်(စ်) ရဲ့ arrow ပုံစံ လန်းလန်း (1)
လိဒ် ဂီတာ တီးခတ်နည်း စာအုပ်
Applications ဖုန်းတွေမှာ တရားတော် နာလိုသူတွေအတွက်
Photo Effect - Photoshop ဖြင့်ဓါတ်ပုံများဖြတ်ကပ်ပြုလုပ်ခြင်း ပြန်လည်မျှဝေသည်
Gmail Account Locked ကျသွားရင်ပြန်ရအောင်လုပ်နည်း
Mobile ကွန်ယက် နည်းပညာ စာအုပ်
Skype အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို
facebook styles လှလှသုံးချင်သူတွေအတွက်
အင်တာနက် အဆ ၂၀ မြန်အောင် လုပ်နည်း